Wasiirka Arrimaha Dibadda XFS oo la kulmay Xoghayaha Guud ee Ururka Jaamacadda Carabta | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasiirka Arrimaha Dibadda XFS oo la kulmay Xoghayaha Guud ee Ururka Jaamacadda...
Wasiirka Arrimaha Dibadda XFS oo la kulmay Xoghayaha Guud ee Ururka Jaamacadda Carabta
kulanka wasiirka iyo xoghayaha ayaa diiradda lagu saaray horumarada Dowladda Soomaaliya ay ka sameysay dhinacyada Siyaasadda, Amniga, Dhaqaalaha iyo dib u dhiska dalka.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad ayaa xoghayaha Guud ee Ururuka Jaamacadda Carabta warbixin ka siiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee Soomaaliya, iyadoo xoghayuhu uu bogaadiyey horumarada iyo dadaalada ay wado dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Abul Qeyd ayaa sheegay in Jaamacadda Carabta ay mar waliba garab taagan tahay Soomaaliya, islamarkaana ay gacan ka geysaneyso dib usoo celinta Nabadda iyo Xasiloonida Soomaaliya.
Xogahaya guud ee Ururuka Jaamacadda Carabta Mudane Axmed Abul Qeyd ayaa xusay in si gaar ah Hay’adaha amniga Soomaaliya lagala shaqeyn doon sidii ay u gudan lahaayeen waajibaadkooda dhinaca sugidda amniga ah.
Waxaa sidoo kale uu sheegay in deeq bixiyeyaasha Caalamiga ah ay kala hadli doonaan sidii gar gaar loo gaarsiin Soomaaliya, sidaasi oo kalena dowladda federaalka ah ay kala shaqeyn doonaan dhinaca Doorashooyinka soo socda islamarkaana ay usoo diri doonaan kormeerayaal ka socda Ururka Jaamacadda Carabta.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad ayaa dalka Boqortooyada sacuudiga uga qeyb galay shirka Wasiirada Arrimaha Dibadda ee ururka Jaamacadda Carabta oo hor dhac u ah shir madaxeedka 29-aad ee madaxda ururka Jaamacadda Carabta.
Previous articleWasiir Maxamed Cabdullahi Salaad “Omaar” oo kulan la yeeshay jaaliyada Soomaliyeed ee Turki
Next articleMadaxweynaha Jamuuriyada Soomaaliya oo u ambabaxay dalka Sacuudiga